Midaysan: Madal Hawlgalka Bulshada | Martech Zone
Midaysan waxay bixisaa tikniyoolajiyadda suuqgeynta daruuriga ah iyo codsiyada u saamaxaya ururkaaga inuu maareeyo dhammaan meertada bulshada ee suuq-geynta bulshada, isagoo gaarsiinaya ROI cad oo tiradeysan Barxadda Unified waxay bixisaa nidaam midaysan oo rikoodh loogu talagalay noocyada, wakaaladaha iyo waratada.
Faa'iidooyinka Madal Hawlgal Bulsho
Lahaanshaha iyo xakameynta xogtaada suuqgeynta - Nidaamka Hawlaha Bulshadu wuxuu isku xirayaa dhammaan hay'adaha, iibiyeyaasha iyo noocyada aad la shaqeysid hal nidaam suuq geyn daruur ah, isagoo kaa siinaya aragti dhammaystiran dhammaan hay'adahaaga suuq-geynta oo dhan. Ku dhiirrigeli shirkaddaada inay dhaqso u dhaqaaqdo oo ay isbeddello sameyso - waad beddeli kartaa wakaaladaha, waratada ama kooxaha gudaha adigoon weligaa lumin xogta taariikhiga ah.
Fuliyaan ololeyaal bulsheed oo adag - Ku gaadho macaamiisha waqtiga saxda ah, oo ay la socoto farriinta saxda ah, dhammaan shabakadaha bulshada ee hal madal. Nidaamka Hawlaha Bulshadu wuxuu awood u siiyaa maareeyayaasha bulshada, qorsheeyeyaasha warbaahinta iyo hay'adaha hal-abuurka ah inay ka shaqeeyaan isla ujeeddada - dhaqaajinta dhagaystayaashaada.
In kor loo qaado warbaahinta mushaarka leh, la leeyahay iyo tan la kasbaday - Samee doolar kasta oo aad kubixiso warbaahinta inay sii fogaadaan - eeg ka badan qasabadaha iyo dareenka oo bilaw inaad sifiican u saameyso ugu badnaan adoo fahmaya sida warbaahintaada mushaarka leh ay u abuurto qiimo warbaahineed oo dheeri ah marka ay dadku kujiraan waxyaabahaaga. Nidaamka Hawlaha Bulshadu waa xalka kaliya ee isu keena warbaahinta mushahar leh, milkiilaha leh iyo kasbatay.
U turjun xogta weyn ROI - Fududee warbixintaada adoo u xilsaaraya ficillada bulshada (sida, fikradaha, saamiyada, tweets, iwm.) Qiimahooda doolarka, taas oo kuu suurta gelinaysa inaad isbarbar dhigto oo aad u habeyn karto soo celinta ugu badan ee maalgashiga. U oggolow qof walba oo kooxdaada ka mid ah inuu cabbiro waxqabadka ku saleysan ROI, halkii aad diiradda saari lahayd jaangooyooyinka jilicsan ama aan caddayn sida hawlgelinta ama gaarista.
Samee go'aanno ku saleysan xog - Nidaamka Hawlgalka Bulshada wuxuu caadi ka dhigayaa oo qiyaasayaa macluumaadkaaga suuq-geynta si uu jawaabo ugu bixiyo su'aalaha sida barnaamijkee u sameeyay ROI-ka ugu weyn ololahan? Iibiyaha ama PMD kee baa sifiican uqabtay waqti go'an? Sideen lacag ugu isticmaali karnaa xayeysiinta bulshada si wax ku ool ah?
Nolosha Bulshada ee Midaysan
Tags: kasbadeen warbaahintawarbaahintu leedahaywarbaahinta lacag la siiyayololeyaal bulsheednidaamka hawlgalka bulshadamideysanmidaysan bulshada